Hutano, 07 Ndira 2021
Vanhu Makumi Matatu neVana (34) Vofa neCovid-19 neChipiri Asi Nyanzvi Dzichiti Vakatowanda Kudarika Apa
Bazi rezvehutano rakazivisa kuti nezuro vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakashaya nechirwere cheCovid-19 vamwe churu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 1, 365 vakatapurirwa chirwere ichi.
Mutumbi weMurume Akawira paMapopoma eVictoria Falls Wonetsa Kutora
Mutauriri weZimParks, VaTinashe Farawu, vanoti mutumbi waVaRoy Dikinya, avo vakadonhera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls zuva regoredzva, wakawanikwa asi havasati vakwanisa kuutora kubva pawakadonhera.
Mitambo yeCricket Yombomiswa Nenyaya yeCovid-19
Vanotungamira mutambo uyu veZimbabwe Cricket vamisa mitambo yese kusanganisira makundano ezvikwata zvemuno eT20 Logan Cup ayo anga achifanira kutanga neMuvhuro mangwanani.
MDC Alliance Inorasikirwa neGamba Munyaya dzeKuchengetedzwa kweNyika
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vati sebato vari kushushikana zvikuru nekufa kwaVaEmmanuel Chimwanda, avo vanga vari munyori wezvekuchengetedzwa kwenyika.
Ndira 01, 2021
Gore Idzva ra2021 Rinosvika Risina Mutsindo Wakanyanya muZimbabwe
Mumwe mugari wemuHarare, VaVictor Ndlovu, vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regore dzva, asi rwendo rwuno vatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane.